Archives des Fiombonana | Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Catégorie : Fiombonana
An-tsary / Vaovao
Nitsidika an’i Afrika ny Papa Fransoa : Fifampizaràna an-tsary
Nitsidika an’i Afrika ny Papa Fransoa ny 25 ka hatramin’ny 30 novambra lasa teo. Kenya, Ouganda ary Centrafrique, ireo no firenena notsidihany. Feno tokoa ny fandaharam-potoana (jereo eto ny antsipiriany) ary mafonja ny hafatra...
Akon’ny famaranana ny taon-jôbily
TSATILAKRI ! Isaorana ny Tompo, isaorana ireo rayamandreny, isaorana antsika rehetra sy ireo mpanao soa fa tontosa soa aman-tsara ny fihaonam-be nasiônalin’ny Afafi-Fet ho famaranana ireo taon-jôbily maro sosona. Ho entina miandalana eto ihany...
Foibe nasiônaly sy Ekipa nasiônaly
Ny Foibe Nasiônaly Manana Foibe Nasiônaly ny AFAFI-FET. Ao Antananarivo no misy azy io, ao amin’ny CNPC Antanimena Varavarana faha 36 sy 38, andamosin’ny paositra. Saika mivoha isan’andro ny birao, afa-tsy ny sabotsy sy...